ငွေ(၃)သိန်း ရှိတာ ဘာ ရင်းနှီးပြီး ဘာလုပ်ရရင် ကောင်းမ လဲ စဉ်းစားနေသူများအတွက် အရမ်း ကောင်း တဲ့ IDEA လေး ပါ – Zartiman
၀င်ငွေ (၃)သိန်းရှိရင် နောက် လမှာ(၅)သိန်း ဝင်နိုင်အောင် ရည်မှန်း ထားပါ။ အာ့မှ ဦးနှောက်လဲ အလှမ်း မဝေးတဲ့ ရည်မှန်းချက် ကိုဖြစ် မြှောက်အောင် အဖြေရှာပေး လိမ့်မယ် …။အိုင်ဒီယာရှိပြီး လက်တွေ့မလုပ်သေးပဲ။ အစဉ် စီချ လိုက်။ ဟိုဟာ စောင့်လိုက်၊ဒီဟာ စောင့်လိုက် ဆိုရင်တော့ဘဝက ဘာမှ ဖြစ်မြှောက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငွေထက် တန်ဖိုးကြီးတာ မင်း ခေါင်းပါ။ လက်တွ့လုပ်ဖို့လဲ လိုတယ် …။ စာ ဖတ်သူလဲ အရင်းအနှီး ကိစ္စကို ဘယ်လိုမြင် ပါသလဲ၊ဘယ်လို ယူစ ပါသလဲ၊ ဆိုတာကိုComment ပေးကြပါလို့။ ဗဟုသုတတွေ မျှဝေရင်း အပိုင်း(၂)မှာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားကြ မယ်။အားလုံးငွေကြေးရေးအဆင်ပြေကြပါစေနော် …။
ဒီစာက သင့်အတွက်အကြိုးရှိစေတယ်ဆိုရင် Like & Share လုပ်ပေးကြပါလို့ …။သိပ်ေ ကာင်းတဲ့ idea တစ်ခု ကို မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်။ အရင်းဆုံ ကိစ္စမတင်ပြခင် ပြောပြသင့်တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခု ရှိပါတယ် …။စတိမ့်ဖော့်(Stanford) တက္ကသိုလ် ကကျောင်း ဆရာမ ဖြစ်သူ တီနာ ဇီးလစ်(Tina seelig) ဟာကျောင်းသား/သူတွေကို စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုပြုလုပ် လိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းသား/သူတွေကိုအသင်း (၁၄) သင်းဖွဲ့လိုက်တယ်။ အသင်း (၁)သင်းစီ ကို စာအိတ် (၁) အိတ်စီ ပေးပါတယ် …။စာအိပ်ထဲမှာငွေ (၅)ဒေါ်လာ ထည့်ထားသည်။ (မြန် မာငွေ ကျပ်= ၆၅၀၀ ဝန်းကျင်)ငွေ(၅)ဒေါ်လာထဲနှင့် ကိုယ့်အိုင်ဒီယာ ကိုယ် သုံးပြီး။ အရင်းအနှီး လုပ်ခိုင်း မည် ။
စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်က ပြင်ဆင်ချိန် (၁) ပတ်ရမည် …။စာအိတ်ထဲကငွေ(၅)ဒေါ်လာဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်သည့် လုပ်ငန်းကို သွား ရင်းနှီး ပြီး ငွေထပ် တိုးလာအောင် လုပ်ဆောင်ရမည်။ စာအိတ်ကို ဖောက်လိုက်သည်နှင့် ရင်းနှီးရမည့် အချိန် (၂)နာရီသာ လုပ်ရမည် …။ (၁၄) သင်းစလုံး ရင်းနှီးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါက ၂ နာရီအတွင်း ရင်းနှီး ခဲ့သည့် ပုံစံ၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပြန်ရလာသည့်ငွေ၊ စသည့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှကို အခန်းရှေ့သို့ထွက်ပြီး ကျောင်းသား/သူ အားလုံးရဲ့ ရှေ့၌ပြန်လည် ရှင်းလင်း ပြောပြ ရမည်ဖြစ်သည် …။ အသင်း(၁)သင်းစီရဲ့ ရှင်းလင်း ပြောကြားရမည့် အချိန်ဟာ (၃)မိနစ် စီသာ ရရှိ မည်ဖြစ်သည်။
ဒီစိန်ခေါ်မှုမှာရင်းနှီးပြီး ငွေပြန် မရသည့် အသင်းရှိ သလို၊ငွေ အတော်အသင့် ပြန်ရ လာသည့် အသင်းလဲ ရှိသည်။ အံ့အားသင့်စရာက အ သင်း (၁)သင်းဟာဒေါ်လာ (၆၀၀)ကျော်အထိ အမြတ် ရရှိအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့ သည် ။ မြန်မာငွေ ကျပ်(၇သိန်း ၈သောင်း)ဝန်းကျင်၊ ထူးဆန်းသည်က စာအိတ်ထဲ ကငွေ (၅)ဒေါ်လာကို တပြား တချက်မျှ မထိခဲ့ဘူးလို့လဲ သိရသည် …။ငွေ(၅)ဒေါ်လာမှ = ငွေ(၆၀၀)ဒေါ်လာ ထိဆိုတော့ ၄၀၀၀% အမြတ် ရရှိခြင်းဖြစ် သည်။၂ နာရီအတွင်းထဲနှင့် ဒီအသင်းဘယ်လို လုပ်ခဲ့ပါသလဲ ??ဟုတ်ကဲ့။ သူတို့ အသင်းရဲ လုပ် ဆောင်ချက်တွေ မဖော်ပြခင် အခြားအသင်းများ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အနည်းငယ် ဖော်ပြ ချင်ပါတယ် …။
အသင်း = (၁)ငွေ (၅)ဒေါ်လာဖြင့် တာယာလေထိုးစက်၊ လေစစ် ဆေးစက် တွေကို ငြားရမ်းလာပြီးကျောင်းတွင်းကကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးပါကင် ထိုးသည့် နေရာရဲ့ အနီးမှာ ဝန်ဆောင် မှုပေးသည်။တာယာ စစ်ဆေးခ၊ လေထိုးခတွေကို ဝန်ဆောင်ကြေးယဉ် တစ်စီးကို (၁)ဒေါ်လာ ကောက်ခံသည် …။ဖြစ်ချင်တော့ ယဉ်စီးနှင်းသူကျောင်းသား/သူများ သဘောကျကြသည်။ လမ်းကြုံတုန်းလေး ကိုယ့်ယဉ်ရဲ့ တာယာ၊ လေ၊ တွေကို စစ်ဆေး ကြသည် …။ ခဏကြာတော့ သင်းသားတွေဟာ အိုင်တီယာ တခုထွက်ပီး စမ်းသပ်ချင် သည့် စိတ်ဖြင့် ဝန် ဆောင်ခ ငွေ(၁)ဒေါ်လာ မကောက်တော့ပဲ ယဉ်ပိုင်ရှင် ကသာ၊ ဝန်ဆောင်ခကို စေတနာရှိ သလောက်၊
ပေးချင်သလောက်ပေး ဆိုသည့် ဆိုင်းပုဒ်ပြန်ပြောင်း လိုက်သည် …။ရလဒ်ကတော့ ဝန်ဆောင်ခ ပိုအရ များ လာခြင်းဖြစ် သည်။ တချို့ ယဉ်ပိုင်ရှင်တွေဟာ(၃)ဒေါ်လာမှ (၅)ဒေါ်လာထိ ထုတ်ပေးကြသည်။ ဒီလို စွမ်းဆောင်မှု ကတော့ ပြသနာတွေကို အကဲ ခတ်ပြီး ပြုပြင် နိုင်စွမ်း ရှိ ခြင်းပဲ ဖြစ်သည် …။ကျန်ရှိသည့်အသင်းများဟာလဲဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း။ ကျောင်းတွင်း သို့ချိုချဉ်၊ မုန့်၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်း။ Popular ဖြစ်တဲ့ သီချင်းခွေထုတ်လုပ်ရောင်းခြင်း။ ကျန်သည့် ကျောင်းသား/သူ အားလုံးရဲ ဝင်ငွေ၊ အမြတ်ငွေတွေ ကတော့ မဆိုးကြ ပါ …။ဒါပေမဲ့ ငွေလုံးဝ ရှာလို့ မရတဲ့ အသင်းလဲ ရှိပါတယ်။ သူတို့အသင်းကတော့ စာအိတ်ထဲက ငွေ(၅)ဒေါ်လာကို ထီ သွားဝယ် လိုက်သည်။
ထီမပေါက် ပါ။ ကံနဲ ကစားလို့ အရင်းနှီးပါ ပြုတ်သွားရော။ဒေါ်လာ (၆၀၀) ရှာနိုင်သည့် အသင်း၊ ဟုတ်ကဲ့….သူတို့ အသင်းကေတာ့ အိုင် ဒီယာ အတ်ာလေးကောင်းပါတယ် …။စာအိတ်ထဲက ငွေ(၅)ဒေါ်ကို အာရုံမစိုက်။ အခန်းရွေ့ထွက်ပြီး ကျောင်းသား/သူများရဲ့ ရွေ့သို့ ရှင်း လင်းပြောကြားရမည်။ (၃)မိနစ် အချိန်လေးကိုသာ အသုံးချဖို့ အာရုံ စိုက်သည် …။လုပ်ဆောင်ချက်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ သူတို့ သွားသည်။ ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲနှင့် တွေ့စုံသည်။သူတို့ကျောင်းမှာ ပြုလုပ်နေသည့် စိန်ခေါ်မှုအကြောင်းအားလုံးကို ရှင်းလင်းပြောပြသည် …။ ကျောင်း သား/သူ အားလုံးရှေ့၌(၃)မိနစ် စကားပြောရမည့် အချိန်မှာကုမ္ပဏီအကြောင်းကို ကြော်ညာပေးခြင်း။
ကုမ္ပဏီရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ရောင်းပေးခြင်း။ ကျောင်းသား/သူ(၁၄)သင်းဆိုသည်မှာ နည်းသည့် လူတွေ မဟုတ်၊ အခြားကျောင်းသား/ သူတွေ လည်း ရှိသေး သည်။ဒီလူ အများရဲ့ရှေ့၌ ကုမ္ပဏီ အကြောင်းတွေကိုကြော်ညာပေးမည် ဆိုပါက ကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးရှိမည်။ ကြော်ညာခ စရိတ် အတွက် သူတို့ အသင်း ဒေါ်လာ(၆၀၀)ရ ချင်သည်ဟု ကမ်းလှမ်းလိုက်သည် …။ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲလည်း သူတို့အ သင်းကို သဘောကြသည်။ ကမ်းလှမ်းမှု ကို လက်ခံပြီးဒေါ်လာ(၆၀၀) ထုတ်ပေး လိုက်သည် …။ အသင်းအားလုံး ရင်းနှီးပြီးဆုံး ချိန်။ အခန်း ရှေ့ ထွက်ပြီး။ ကိုယ့်အိုင်ဒီ ယာငွေရှာ လာသည့် ပုံစံ။ ရရှိလာသည့် အတွေ့အကြုံတွေ ကို ရှင်းလင်းပြောပြ ကြ သည်။
ငွေအများဆုံး ရသည့်အသင်းကတော့ကုမ္ပဏီ အကြောင်း ကုန် ပစ္စည်းတွေကို ကြော်ညာပေးရင်း သူ့တို့ရဲ့ အိုင်ဒီယာ အကြောင်းကိုပါ ရှင်းလင်းပြောပြသည် …။ဒီအဖြစ် အပျက်ကို ဒီလောက်နှင့်ပဲ အဆုံးသတ် လိုက်ပါတော့မည်။ အရင်းအနှီး တစ်ပြားမှ မသုံးပဲ။ ငွေ (၆၀၀) ဒေါ်လာ ရရှိအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား/သူ တွေဟာ။ ဘာတွေ သင်ပေးသွားပါသလဲ။ ???ဟုတ်ကဲ့။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ငွေအင် အားကိုမကြည့်သင့်ပါ။ အာရုံမစိုက်သင့်ပါ။ ကိုယ့်မှာ ရှိသည့် ညဏ်ရည်ကိုသာအသုံးချ လိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။ အကယ်၍ငွေ ၁၅ သိန်းရှိမှ။ သိန်း ၃၀ ရှိမှ။ သိန်း ၁၀၀ ရှိမှ။ရင်းနှီးနိုင်မယ်။ လုပ်နိုင်မယ် လို့သာတွေးနေရင်အာရုံစိုက်နေရင်။
မင်းဦးနှောက်ကို မင်းပဲပြန်ပိတ်ပင်လိမ့်မယ် …။ဘာ အိုင်ဒီယာမှ မထွက်ပါ စိတ်ကူးကောင်းမှလဲထွက်လာမှာ မဟုတ်။မင်းဝင်ငွေ များချင် လို့။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းလုပ် ချင်တာလေ။ ငွေရှာချင် တာလေ …။ငွေရှာဖို့ အတွက်ကိုငွေမရှိဘူး ၊ အရင်းနှီးနည်းတယ်လို့သာ စွတ်ပြောနေရင် ရယ်စရာ ဖြစ် လိမ့်မယ် …။တကယ်တော့ ငွေထက် တန်ဖိုးကြီးတာမင်း ခေါင်းပဲ။ ခေါင်းသုံး ပါ၊ ညဏ်သုံးပါ။ အိုင်ဒီယာ သုံးပါ။ အဲ့ဒီ အရာ တွေက ငွေထက်သန်း ပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိတယ် …။ မြန်မာနိုင်ငံထဲက အရင်းနှီး နည်းနည်းနဲ့လုပ်ငန်း စကြတဲ့ လူအတော်များများကို တွေ့ဖူးသည်။ အင်တာဗျူးဖူး သည်။ အဲ့ထဲက တစ်ယောက် အကြောင်းကို အရင်ရေး တင်ပြချင် ပါတယ်။
ကျန်တာက နောက်မှ ဆက်လက် တင်ပြမည် …။ သူကကောင်မလေးပါ။ ဒုတိယနှစ်၊ အဝေးသင်ကျောင်းသူ။ ၁၀ တန်းပြီး တာနှင့် နံနက် ၄ နာရီနိုးသည်။ဝက်ခေါက်၊ ကြက်ခေါက်တွေ ကြော်သည်။ ဈေးသို့ တင်ရောင်းသည် …။ နေ့ခင်းပိုင်းမှ ညနေအထိ လေယဉ်လက်မှတ်ရောင်း ကိုယ်စားလှယ် လုပ်သည်။ ဆိုင်ခန်းငယ် ကလေးဖြင့်လေယဉ် လက်မှတ်ရောင်းနေသည် …။ သိပ်မကြာမှာပဲ ဆိုင်ကို အလှဆင်ပြီး အမျိုးသ မီးအိတ် ကလေးတွေ ကို အနည်းအကျင်း တင်ရောင်းသည်။ နောက်ထပ် မကြာခင်မှာပဲ သူသဘောကျသည့် အင်္ကျီတွေ သူသဘောကျသည့် လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေကို အနည်းအကျင်း တင်ရောင်းသည် …။
သူလုပ်ချင်တာကို တတ်နိုင်သလောက် သူလုပ် လာသည်။ အခုလဲ သူပုံနှိပ်စက်တွေ ပါ လုပ်နေသည်။ပုံနှိပ်သည့် နေရာက အိမ်မှာ၊ ပစ္စည်း /အလုပ် လက်ခံ တာက ဆိုင်မှာ ဖြစ်သည် ..။သူမ လုပ်ချင်တာကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု။ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်။ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ သူမလည်းသူ့ အိုင်ဒီယာကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူလည်း‌ ငွေကို ဦးစားမပေးသင့်။ ငွေကို အာရုံ မစိုက်သင့် …။ငွေ ဒီလောက်ရှိမှငွေ ဟိုလောက်ရှိမှ ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်က သတ်မှတ် ထားတာပါ …။ ငွေကို အာရုံစိုက်နေရင်။ ဦး နှောက်လုပ်ဆောင် ချက်တွေ။ စိတ်းကူးကောင်းတွေ။ အိုင်ဒီယာကောင်းတွေ ကို ပါ ဖျက်စီးပြစ် လိမ့်မယ် …။ကိုယ် ဘာ ကျွမ်းကျင်တာ ။
ကိုယ် ဘာတွေ့ထား တယ်။ကိုယ် ဘာလုပ် သင့်တယ်။ ဘယ်အခွင့်အရေး ကို ယူသင့် တယ်။ စသည့် အချက် တွေကို သိ ပါစေ။ မသိသေးလဲ အဖြေရှာ။ ကိုယ့်မှာ အိုင်ဒီယာကောင်းတွေရှိရင်။ လက်တွေ့ လုပ် လိုက်ပါ …။တတ်နိုင်သလောက် စလုပ်ပါ။ လုပ်ပြီး မအောင်မြင်သေးပေမဲ့ အားမငယ် ပါနဲ့။ ပြသာနာတွေကို သိရှိလာမယ်။ ဖြေရှင်း တတ်လာ မယ်။ အစပိုင်း ဝင်ငွေနည်းနေပေမဲ့ ဝင်ငွေ များလာအောင် လုပ်နိုင် မည့် နည်းလမ်းတွေကို အဖြေရှာ တတ်လာ မယ်။ ရည်မှန်းချက်ကို အလှမ်းမဝေး ပါစေနဲ့ …။ ဥပမာ(၁)လ မှာ ဝင်ငွေ (၃)သိန်း ရှိတယ်။ ရည် မှန်းချက်က နောက်လမှာ ဝင်ငွေ(၁၅)သိန်းတိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့။ ဦးနှောက်က မဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေပဲ တွေး လိမ့်မယ် …။
၀ငျငှေ (၃)သိနျးရှိရငျ နောကျ လမှာ(၅)သိနျး ဝငျနိုငျအောငျ ရညျမှနျး ထားပါ။ အာ့မှ ဦးနှောကျလဲ အလှမျး မဝေးတဲ့ ရညျမှနျးခကျြ ကိုဖွဈ မွှောကျအောငျ အဖွရှောပေး လိမျ့မယျ …။အိုငျဒီယာရှိပွီး လကျတှမေ့လုပျသေးပဲ။ အစဉျ စီခြ လိုကျ။ ဟိုဟာ စောငျ့လိုကျ၊ဒီဟာ စောငျ့လိုကျ ဆိုရငျတော့ဘဝက ဘာမှ ဖွဈမွှောကျလာမှာ မဟုတျပါဘူး။ ငှထေကျ တနျဖိုးကွီးတာ မငျး ခေါငျးပါ။ လကျတှ့လုပျဖို့လဲ လိုတယျ …။ စာ ဖတျသူလဲ အရငျးအနှီး ကိစ်စကို ဘယျလိုမွငျ ပါသလဲ၊ဘယျလို ယူစ ပါသလဲ၊ ဆိုတာကိုComment ပေးကွပါလို့။ ဗဟုသုတတှေ မြှဝရေငျး အပိုငျး(၂)မှာ ဆကျလကျဆှေးနှေးသှားကွ မယျ။အားလုံးငှကွေေးရေးအဆငျပွကွေပါစနေျော …။
ဒီစာက သငျ့အတှကျအကွိုးရှိစတေယျဆိုရငျ Like & Share လုပျပေးကွပါလို့ …။သိပျေ ကာငျးတဲ့ idea တဈခု ကို မြှဝပေေး လိုကျပါ တယျ။ အရငျးဆုံ ကိစ်စမတငျပွခငျ ပွောပွသငျ့တဲ့ အဖွဈအပကျြ တဈခု ရှိပါတယျ …။စတိမျ့ဖေျာ့(Stanford) တက်ကသိုလျ ကကြောငျး ဆရာမ ဖွဈသူ တီနာ ဇီးလဈ(Tina seelig) ဟာကြောငျးသား/သူတှကေို စိနျချေါမှု တဈခုပွုလုပျ လိုကျပါတယျ။ ကြောငျးသား/သူတှကေိုအသငျး (၁၄) သငျးဖှဲ့လိုကျတယျ။ အသငျး (၁)သငျးစီ ကို စာအိတျ (၁) အိတျစီ ပေးပါတယျ …။စာအိပျထဲမှာငှေ (၅)ဒျေါလာ ထညျ့ထားသညျ။ (မွနျ မာငှေ ကပျြ= ၆၅၀၀ ဝနျးကငျြ)ငှေ(၅)ဒျေါလာထဲနှငျ့ ကိုယျ့အိုငျဒီယာ ကိုယျ သုံးပွီး။ အရငျးအနှီး လုပျခိုငျး မညျ ။
စညျးကမျး သတျမှတျခကျြက ပွငျဆငျခြိနျ (၁) ပတျရမညျ …။စာအိတျထဲကငှေ(၅)ဒျေါလာဖွငျ့ ကိုယျကွိုကျသညျ့ လုပျငနျးကို သှား ရငျးနှီး ပွီး ငှထေပျ တိုးလာအောငျ လုပျဆောငျရမညျ။ စာအိတျကို ဖောကျလိုကျသညျနှငျ့ ရငျးနှီးရမညျ့ အခြိနျ (၂)နာရီသာ လုပျရမညျ …။ (၁၄) သငျးစလုံး ရငျးနှီးမှုပွုလုပျခဲ့ပွီးပါက ၂ နာရီအတှငျး ရငျးနှီး ခဲ့သညျ့ ပုံစံ၊ လုပျဆောငျခကျြ၊ ပွနျရလာသညျ့ငှေ၊ စသညျ့ လုပျဆောငျခဲ့သမြှကို အခနျးရှသေို့ထှကျပွီး ကြောငျးသား/သူ အားလုံးရဲ့ ရှေ့၌ပွနျလညျ ရှငျးလငျး ပွောပွ ရမညျဖွဈသညျ …။ အသငျး(၁)သငျးစီရဲ့ ရှငျးလငျး ပွောကွားရမညျ့ အခြိနျဟာ (၃)မိနဈ စီသာ ရရှိ မညျဖွဈသညျ။
ဒီစိနျချေါမှုမှာရငျးနှီးပွီး ငှပွေနျ မရသညျ့ အသငျးရှိ သလို၊ငှေ အတျောအသငျ့ ပွနျရ လာသညျ့ အသငျးလဲ ရှိသညျ။ အံ့အားသငျ့စရာက အ သငျး (၁)သငျးဟာဒျေါလာ (၆၀၀)ကြျောအထိ အမွတျ ရရှိအောငျ စှမျးဆောငျ နိုငျခဲ့ သညျ ။ မွနျမာငှေ ကပျြ(၇သိနျး ၈သောငျး)ဝနျးကငျြ၊ ထူးဆနျးသညျက စာအိတျထဲ ကငှေ (၅)ဒျေါလာကို တပွား တခကျြမြှ မထိခဲ့ဘူးလို့လဲ သိရသညျ …။ငှေ(၅)ဒျေါလာမှ = ငှေ(၆၀၀)ဒျေါလာ ထိဆိုတော့ ၄၀၀၀% အမွတျ ရရှိခွငျးဖွဈ သညျ။၂ နာရီအတှငျးထဲနှငျ့ ဒီအသငျးဘယျလို လုပျခဲ့ပါသလဲ ??ဟုတျကဲ့။ သူတို့ အသငျးရဲ လုပျ ဆောငျခကျြတှေ မဖျောပွခငျ အခွားအသငျးမြား လုပျဆောငျခကျြတှကေို အနညျးငယျ ဖျောပွ ခငျြပါတယျ …။
အသငျး = (၁)ငှေ (၅)ဒျေါလာဖွငျ့ တာယာလထေိုးစကျ၊ လစေဈ ဆေးစကျ တှကေို ငွားရမျးလာပွီးကြောငျးတှငျးကကား၊ ဆိုငျကယျ၊ စကျဘီးပါကငျ ထိုးသညျ့ နရောရဲ့ အနီးမှာ ဝနျဆောငျ မှုပေးသညျ။တာယာ စဈဆေးခ၊ လထေိုးခတှကေို ဝနျဆောငျကွေးယဉျ တဈစီးကို (၁)ဒျေါလာ ကောကျခံသညျ …။ဖွဈခငျြတော့ ယဉျစီးနှငျးသူကြောငျးသား/သူမြား သဘောကကြွသညျ။ လမျးကွုံတုနျးလေး ကိုယျ့ယဉျရဲ့ တာယာ၊ လေ၊ တှကေို စဈဆေး ကွသညျ …။ ခဏကွာတော့ သငျးသားတှဟော အိုငျတီယာ တခုထှကျပီး စမျးသပျခငျြ သညျ့ စိတျဖွငျ့ ဝနျ ဆောငျခ ငှေ(၁)ဒျေါလာ မကောကျတော့ပဲ ယဉျပိုငျရှငျ ကသာ၊ ဝနျဆောငျခကို စတေနာရှိ သလောကျ၊
ပေးခငျြသလောကျပေး ဆိုသညျ့ ဆိုငျးပုဒျပွနျပွောငျး လိုကျသညျ …။ရလဒျကတော့ ဝနျဆောငျခ ပိုအရ မြား လာခွငျးဖွဈ သညျ။ တခြို့ ယဉျပိုငျရှငျတှဟော(၃)ဒျေါလာမှ (၅)ဒျေါလာထိ ထုတျပေးကွသညျ။ ဒီလို စှမျးဆောငျမှု ကတော့ ပွသနာတှကေို အကဲ ခတျပွီး ပွုပွငျ နိုငျစှမျး ရှိ ခွငျးပဲ ဖွဈသညျ …။ကနျြရှိသညျ့အသငျးမြားဟာလဲဓာတျပုံရိုကျခွငျး။ ကြောငျးတှငျး သို့ခြိုခဉျြ၊ မုနျ့၊ အရောငျးအဝယျလုပျခွငျး။ Popular ဖွဈတဲ့ သီခငျြးခှထေုတျလုပျရောငျးခွငျး။ ကနျြသညျ့ ကြောငျးသား/သူ အားလုံးရဲ ဝငျငှေ၊ အမွတျငှတှေေ ကတော့ မဆိုးကွ ပါ …။ဒါပမေဲ့ ငှလေုံးဝ ရှာလို့ မရတဲ့ အသငျးလဲ ရှိပါတယျ။ သူတို့အသငျးကတော့ စာအိတျထဲက ငှေ(၅)ဒျေါလာကို ထီ သှားဝယျ လိုကျသညျ။
ထီမပေါကျ ပါ။ ကံနဲ ကစားလို့ အရငျးနှီးပါ ပွုတျသှားရော။ဒျေါလာ (၆၀၀) ရှာနိုငျသညျ့ အသငျး၊ ဟုတျကဲ့….သူတို့ အသငျးကတော့ အိုငျ ဒီယာ အတျာလေးကောငျးပါတယျ …။စာအိတျထဲက ငှေ(၅)ဒျေါကို အာရုံမစိုကျ။ အခနျးရှထှေ့ကျပွီး ကြောငျးသား/သူမြားရဲ့ ရှသေို့ ရှငျး လငျးပွောကွားရမညျ။ (၃)မိနဈ အခြိနျလေးကိုသာ အသုံးခဖြို့ အာရုံ စိုကျသညျ …။လုပျဆောငျခကျြ။ ကုမ်ပဏီတဈခုသို့ သူတို့ သှားသညျ။ ကုမ်ပဏီ အကွီးအကဲနှငျ့ တှစေုံ့သညျ။သူတို့ကြောငျးမှာ ပွုလုပျနသေညျ့ စိနျချေါမှုအကွောငျးအားလုံးကို ရှငျးလငျးပွောပွသညျ …။ ကြောငျး သား/သူ အားလုံးရှေ့၌(၃)မိနဈ စကားပွောရမညျ့ အခြိနျမှာကုမ်ပဏီအကွောငျးကို ကွျောညာပေးခွငျး။
ကုမ်ပဏီရဲ့ ကုနျပစ်စညျးကို ရောငျးပေးခွငျး။ ကြောငျးသား/သူ(၁၄)သငျးဆိုသညျမှာ နညျးသညျ့ လူတှေ မဟုတျ၊ အခွားကြောငျးသား/ သူတှေ လညျး ရှိသေး သညျ။ဒီလူ အမြားရဲ့ရှေ့၌ ကုမ်ပဏီ အကွောငျးတှကေိုကွျောညာပေးမညျ ဆိုပါက ကုမ်ပဏီအတှကျ အကြိုးရှိမညျ။ ကွျောညာခ စရိတျ အတှကျ သူတို့ အသငျး ဒျေါလာ(၆၀၀)ရ ခငျြသညျဟု ကမျးလှမျးလိုကျသညျ …။ကုမ်ပဏီ အကွီးအကဲလညျး သူတို့အ သငျးကို သဘောကွသညျ။ ကမျးလှမျးမှု ကို လကျခံပွီးဒျေါလာ(၆၀၀) ထုတျပေး လိုကျသညျ …။ အသငျးအားလုံး ရငျးနှီးပွီးဆုံး ခြိနျ။ အခနျး ရှေ့ ထှကျပွီး။ ကိုယျ့အိုငျဒီ ယာငှရှော လာသညျ့ ပုံစံ။ ရရှိလာသညျ့ အတှအေ့ကွုံတှေ ကို ရှငျးလငျးပွောပွ ကွ သညျ။
ငှအေမြားဆုံး ရသညျ့အသငျးကတော့ကုမ်ပဏီ အကွောငျး ကုနျ ပစ်စညျးတှကေို ကွျောညာပေးရငျး သူ့တို့ရဲ့ အိုငျဒီယာ အကွောငျးကိုပါ ရှငျးလငျးပွောပွသညျ …။ဒီအဖွဈ အပကျြကို ဒီလောကျနှငျ့ပဲ အဆုံးသတျ လိုကျပါတော့မညျ။ အရငျးအနှီး တဈပွားမှ မသုံးပဲ။ ငှေ (၆၀၀) ဒျေါလာ ရရှိအောငျ စှမျးဆောငျ နိုငျခဲ့တဲ့ ကြောငျးသား/သူ တှဟော။ ဘာတှေ သငျပေးသှားပါသလဲ။ ???ဟုတျကဲ့။ ကိုယျ့မှာ ရှိတဲ့ ငှအေငျ အားကိုမကွညျ့သငျ့ပါ။ အာရုံမစိုကျသငျ့ပါ။ ကိုယျ့မှာ ရှိသညျ့ ညဏျရညျကိုသာအသုံးခြ လိုကျခွငျးဖွဈ သညျ။ အကယျ၍ငှေ ၁၅ သိနျးရှိမှ။ သိနျး ၃၀ ရှိမှ။ သိနျး ၁၀၀ ရှိမှ။ရငျးနှီးနိုငျမယျ။ လုပျနိုငျမယျ လို့သာတှေးနရေငျအာရုံစိုကျနရေငျ။
မငျးဦးနှောကျကို မငျးပဲပွနျပိတျပငျလိမျ့မယျ …။ဘာ အိုငျဒီယာမှ မထှကျပါ စိတျကူးကောငျးမှလဲထှကျလာမှာ မဟုတျ။မငျးဝငျငှေ မြားခငျြ လို့။ ကိုယျပိုငျ လုပျငနျးလုပျ ခငျြတာလေ။ ငှရှောခငျြ တာလေ …။ငှရှောဖို့ အတှကျကိုငှမေရှိဘူး ၊ အရငျးနှီးနညျးတယျလို့သာ စှတျပွောနရေငျ ရယျစရာ ဖွဈ လိမျ့မယျ …။တကယျတော့ ငှထေကျ တနျဖိုးကွီးတာမငျး ခေါငျးပဲ။ ခေါငျးသုံး ပါ၊ ညဏျသုံးပါ။ အိုငျဒီယာ သုံးပါ။ အဲ့ဒီ အရာ တှကေ ငှထေကျသနျး ပေါငျးမြားစှာ တနျဖိုးရှိတယျ …။ မွနျမာနိုငျငံထဲက အရငျးနှီး နညျးနညျးနဲ့လုပျငနျး စကွတဲ့ လူအတျောမြားမြားကို တှဖေူ့းသညျ။ အငျတာဗြူးဖူး သညျ။ အဲ့ထဲက တဈယောကျ အကွောငျးကို အရငျရေး တငျပွခငျြ ပါတယျ။
ကနျြတာက နောကျမှ ဆကျလကျ တငျပွမညျ …။ သူကကောငျမလေးပါ။ ဒုတိယနှဈ၊ အဝေးသငျကြောငျးသူ။ ၁၀ တနျးပွီး တာနှငျ့ နံနကျ ၄ နာရီနိုးသညျ။ဝကျခေါကျ၊ ကွကျခေါကျတှေ ကွျောသညျ။ ဈေးသို့ တငျရောငျးသညျ …။ နခေ့ငျးပိုငျးမှ ညနအေထိ လယေဉျလကျမှတျရောငျး ကိုယျစားလှယျ လုပျသညျ။ ဆိုငျခနျးငယျ ကလေးဖွငျ့လယေဉျ လကျမှတျရောငျးနသေညျ …။ သိပျမကွာမှာပဲ ဆိုငျကို အလှဆငျပွီး အမြိုးသ မီးအိတျ ကလေးတှေ ကို အနညျးအကငျြး တငျရောငျးသညျ။ နောကျထပျ မကွာခငျမှာပဲ သူသဘောကသြညျ့ အင်ျကြီတှေ သူသဘောကသြညျ့ လကျဆောငျ ပစ်စညျးတှကေို အနညျးအကငျြး တငျရောငျးသညျ …။
သူလုပျခငျြတာကို တတျနိုငျသလောကျ သူလုပျ လာသညျ။ အခုလဲ သူပုံနှိပျစကျတှေ ပါ လုပျနသေညျ။ပုံနှိပျသညျ့ နရောက အိမျမှာ၊ ပစ်စညျး /အလုပျ လကျခံ တာက ဆိုငျမှာ ဖွဈသညျ ..။သူမ လုပျခငျြတာကို တဈခုပွီး တဈခု။ တဈဆငျ့ပွီး တဈဆငျ့။ တတျနိုငျသလောကျ လုပျခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ ဟုတျကဲ့ သူမလညျးသူ့ အိုငျဒီယာကို အကောငျအထညျ ဖျောခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ စာဖတျသူလညျး‌ ငှကေို ဦးစားမပေးသငျ့။ ငှကေို အာရုံ မစိုကျသငျ့ …။ငှေ ဒီလောကျရှိမှငှေ ဟိုလောကျရှိမှ ဆိုတာ ပတျဝနျးကငျြက သတျမှတျ ထားတာပါ …။ ငှကေို အာရုံစိုကျနရေငျ။ ဦး နှောကျလုပျဆောငျ ခကျြတှေ။ စိတျးကူးကောငျးတှေ။ အိုငျဒီယာကောငျးတှေ ကို ပါ ဖကျြစီးပွဈ လိမျ့မယျ …။ကိုယျ ဘာ ကြှမျးကငျြတာ ။
ကိုယျ ဘာတှထေ့ား တယျ။ကိုယျ ဘာလုပျ သငျ့တယျ။ ဘယျအခှငျ့အရေး ကို ယူသငျ့ တယျ။ စသညျ့ အခကျြ တှကေို သိ ပါစေ။ မသိသေးလဲ အဖွရှော။ ကိုယျ့မှာ အိုငျဒီယာကောငျးတှရှေိရငျ။ လကျတှေ့ လုပျ လိုကျပါ …။တတျနိုငျသလောကျ စလုပျပါ။ လုပျပွီး မအောငျမွငျသေးပမေဲ့ အားမငယျ ပါနဲ့။ ပွသာနာတှကေို သိရှိလာမယျ။ ဖွရှေငျး တတျလာ မယျ။ အစပိုငျး ဝငျငှနေညျးနပေမေဲ့ ဝငျငှေ မြားလာအောငျ လုပျနိုငျ မညျ့ နညျးလမျးတှကေို အဖွရှော တတျလာ မယျ။ ရညျမှနျးခကျြကို အလှမျးမဝေး ပါစနေဲ့ …။ ဥပမာ(၁)လ မှာ ဝငျငှေ (၃)သိနျး ရှိတယျ။ ရညျ မှနျးခကျြက နောကျလမှာ ဝငျငှေ(၁၅)သိနျးတိုးခငျြတယျဆိုရငျတော့။ ဦးနှောကျက မဖွဈနိုငျတဲ့ အကွောငျးတှပေဲ တှေး လိမျ့မယျ …။
ဆောင်းရာသီကာလ အတွက် အစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ